Horonantsary Mozika Maka Tahaka Ny Fitondrana Miaramila Ao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Horonantsary Mozika Maka Tahaka Ny Fitondrana Miaramila Ao Thailandy
Voadika ny 20 Jolay 2017 4:44 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Deutsch, Swahili, Español, English
Pikantsary tamin'ny lahatsary mozika nampidirina tao amin'ny YouTube.
Namoaka lahatsary mozika ny tarika pop malaza ao Thailandy, lahatsary maka tahaka ny fitondrana miaramila izay naka fahefana tamin'ny taona 2014 ary mbola manohy mitantana ny firenena na dia teo aza ny fampanantenany hamerina ny fitondrana amin'ny sivily.
Ny hira vaovaon'ny tarika Tattoo Colour ‘Tovovavy Mpanao Didy Jadona’ (Phadet Girl) dia momba ny tovolahy iray mitantara ny fitsipika napetraky ny sipany taminy.
Na dia tsy momba mazava aza ny politika aza, nilaza ankolaka ny fitohizan'ny fitondrana miaramila ny lahatsary mozikany.
Noderain'ireo mpankafy sy mpisera aterineto hafa ny tarika noho ny herim-pony amin'ny fanehoana ny zava-misy ao amin'ny firenena.
Nalaza avy hatrany ny horonantsary. Amin'izao fotoana hanoratana izao, efa nisy nizara in-1254 sy nitia 8800 sahady ny lahatsary navoaka tao amin'ny Facebook.
Hatramin'izao, mbola azo jerena ao amin'ny Youtube ny lahatsary izay tsy mahazatra satria amin'ny ankapobeny, haingana avy hatrany ny manampahefana manakana votoaty antserasera maneso ny fitondrana.
Tamin'ny volana lasa, na dia ny horonantsary Charlie Chaplin, ‘Mpanao didy jadona ” aza dia voasivana tao Thailand rehefa nanentana ny vahoaka mba hijery izany ny vondrona mpikatroka.
Azo adika toy ny fampidirina zava-baovao sy mahafinaritra momba ny politika Thailandey ny horonantsary, indrindra ny toe-draharaha ao amin'ny firenena eo ambany ny fitondrana miaramila. Diniho ireto sary tao amin'ny horonantsary ireto izay miresaka momba ny olana ara-politika sasany izay namely an'i Thailandy tato anatin'ny telo taona
Pikantsarin'ny horonantsary tao amin'ny YouTube.
Ny ‘fitsipika 44 avy amin'ny ankizivavy’ dia mety manondro ny Fizarana 44 henjana ao amin'ny Lalàm-panorenana Vonjimaika, izay nanome fahefana tanteraka ho an'ny lehiben'ny tafika hanapa-kevitra momba ny olana goavan'ny firenena .
Pikantsary ny horonantsary tao amin'ny YouTube.
Ny fitsipika faha-11: ‘Amboary ny toe-tsaina’, dia mikasika ny fampianarana malaza ratsy momba ny ‘fanitsiana toe-tsaina’ izay omen'ny tafika ho an'ny mpanao gazety, mpianatra, manam-pahaizana, mpikatroka, mpanao politika, sy ny hafa hita fa mitsikera ny fitondrana miaramila.
Pikantsary ny horonantsary navoaka tao amin'ny YouTube.
Ny sary etsy ambony dia mampiseho ny fampiharana ny Lalàna momba ny Heloka Bevava Amin'ny Solosaina izay ampiasain'ny manampahefana matetika hanagadrana mpikatroka sy mpitsikera ny fitondrana ny fehezan-dalàna manjavozavo sy midadasika. Napetraka ny sampan'ny tafika mba hanaramaso ny votoaty antserasera sy hitory ireo olona voampanga ho nanala-baraka ny fitondram-panjaka. Manamafy ny lalàna henjana momba ny Lese Majeste (Fanevatevana ny Mpanjaka) i Thailandy.
Pikantsary ny horonantsary nakarina tao amin'ny YouTube.
Tamin'ny 20 May 2014, nambara tao Thailandy ny lalàna miaramila. Roa andro talohany, nikarakara fanonganam-panjakana ny tafika.
Pikantsary tamin'ny horonantsary navoaka tao amin'ny YouTube.
Iray amin'ireo olana mifandraika amin'ny fitondrana miaramila ny fanapahan-keviny hividy sous-marins (ambanin'ny ranomasina) lafo vidy na dia eo aza ireo mpandalina momba ny fiarovana izay nampitandrina fa tsy ilaina ny fividianana izany fa fandaniana ny volan'ny mpandoa hetra fotsiny.
Na dia ny raharaha mikasika ireo olona nalaina an-keriny sy natsipy tany anaty kamiao miloko mainty alohan'ny nandefasany azy ireo tany am-ponja aza dia hita ao amin'ny lahatsary.
Mbola miatrika famerana goavana ihany koa ny haino aman-jery; nogadraina ireo mpanao gazety sasany noho izy ireo voalaza fa miteraka “fifanjevoana” eo anivon'ny fiarahamonina, ary miatrika sazy an-tranomaizina ela be ireo mpiserasera aterineto raha manevateva ny fitondram-panjakatokana.
Mandritra izany, ny teaser fampahafantarana ny hira dia mampiseho ireo mpikambana ao amin'ny tarika manao fiarahabana ‘Hunger Games’ na Lalaon'ny Hanoanana’ izay nampiasan'ireo mpikatroka manohitra ny fanonganam-panjakana nandritra ny hetsi-panoherana tamin'ny taona 2014.
13 ora izayHong Kong (Shina)
13 ora izayKaraiba